मेयर चौधरीको छोराको निधनमा पूर्वप्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीसम्म मलामी, हजुरबुबाले दिए दागवत्ति - समृद्ध नेपाल
अष्ट्रेलियामा एक नेपाली बलात्कारको अभियोगमा पक्राउ !
दु;ख;द ख;ब;र : नुहाउन गएका एक युवाको महाकाली नदीमा नुहाउने क्रममा डुबेर मृ;;;त्यु
स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा कारागारमा समस्या !
बन्दको समयमा घरभाडा नलिने मनकारी घरबेटी !
दाजु बहिनीले गरे सबै सीमा तोडेर बिहे, विवाह अघि नै ग ‘र्भवती भएको रहस्य खुलेपछी !
टिकटकले लिदै ज्यान ! टिकटक बनाउँदा अचानक कुर्सी चिप्लियो किशोरीको मृत्यु !
दोस्रो विवाह गरेका हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले लगाए ८० वर्षीया आमाबाट टिका !